ဒီကဗျာလေးက လေးလုံးစပ် လေးသုံးကာရန်လေးပါ။ မမီ(မမယ်လိုဒီရဲ့ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ် )ရဲ့ ဘလော့မှာ မမီရေးထားတဲ့ ရိုးရိုးလေးတွေးမိ ကဗျာလေးကို တွေ့ ပြီးရေးဖြစ်သွားတာပါ။
Posted by Villager at 4:38:00 AM7comments
ငယ်ရွယ်သူတွေဟာ နုပျိုတဲ့အချိန်တွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာပါပဲ
နေမင်းကြီးက ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀ ပထမဆုံးနေ့ကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်
ညရောက်တော့ လမင်းကြီးက ကိုယ့်ကို ဖမ်းညှို့ထားတယ်။
လေတွေတိုက်နေတဲ့ကြားမှာ မိုးရေစက်တို့ရဲ့ လွှမ်းခြုံခြင်းနဲ့
လမ်းတွေက ကိုယ့်ကို နေရာပေါင်းများစွာ ပို့ခဲ့တယ်။
နှစ်တွေက ဘယ်နေရာရောက်ရောက် တားဆီးထားကြပြန်တယ်။
ဖြစ်ခြင်တာကို ရအောင်လုပ်မယ် ဆိုပြီး
ခေတ်ကာလတစ်ခုရဲ့ အချိန်တစ်ခုက ကိုယ့်ကို
အောင်မြင်မှုဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ကို လာပြီး
အရာရာကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ရှေ့ဆက်ခဲ့တယ်။
ပျော်စရာတွေ အများကြီး ရသလို
အရင်လို အင်အားတွေ လိုချင်နေမိတယ်…။
နေမင်းကြီး ထွက်မယ့်အချိန်ကို စောင့်တတ်လာတယ်။
ညဆိုလည်း လမင်းကြီး ဖမ်းညှို့နိုင်ဖို့
လေတွေ တိုက်နေတဲ့ ညနေခင်းတွေကို
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကိုယ်တစ်ခု သေချာစွာ
ကိုယ့်ဘ၀မှာ ဘယ်အရာတွေ ဘယ်လိုပဲ ဆုံးရှုံး ဆုံးရှုံး
ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖြူစင်စွာ ရူးသွပ်ခဲ့တဲ့
ကိုယ့်ကို အင်အားတွေ ပေးနေတုန်းပဲ….
အကြိမ်ကြိမ် ကယ်တင်နေတုန်းပဲ၊ ဆိုတာ…
မှတ်ချက် ။ ။ မျိုးကျော့မြိုင် ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
By Thayahpu , February 2004
Posted by Villager at 7:32:00 AM 1 comments
မော်တော်ကားမောင်းသူ တစ်ဦးသည် မီးပွိုင့်တွင် မီးနီပြထားသဖြင့် ယာဉ်ကို ရပ်ထားရပါသည်။ သူ၏နောက်တွင် ယာဉ်ထိန်းရဲက လိုက်လာပါသည်။ ယာဉ်ထိန်းရဲ စီးလာသော ယာဉ်၏ မီးနီမှာ တောက်ပနေပြီး အချက်ပေးသြဥသံလည်း ပေးလာပါသည်။
ယာဉ်ထိန်းရဲက မီးပွိုင့်တွင် ရပ်ထားသော မော်တော်ယာဉ်အား စစ်ဆေးမေးမြန်းပါသည်။ ယာဉ်မောင်းသူမှာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပါမလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို သူ၏ ယာဉ်ထဲတွင် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထားသော စာအုပ်ပင် ပါမလာပါ။
“ကျွန်တော် ခန့်မှန်းလို့ ရပါတယ်” ဟု ယာဉ်ထိန်းရဲ အရာရှိက ဟန်ပါပါပြောပြီး ဒဏ်ကြေးဖြတ်ရန် လက်မှတ်စာအုပ်ကို နှိုက်လိုက်ပါသည်။ သူလည်း မေ့ပြီး စာအုပ်မယူခဲ့မိပေ။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် မော်တော်ယာဉ်မောင်း သူအား လေးလေးနက်နက် သတိပေးပြီး ဆက်လက်မောင်းခွင့်ပေးရုံမှ လွဲ၍ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပါ။ (Quote)
မှတ်ချက်။ ။ ဒေါက်တာသိန်းလွင်ရဲ့ အတွေးစာစုများ
Posted by Villager at 3:08:00 AM2comments
လူနှစ်ဦး ခိုက်ရန်ဖြစ်သည့်ကိစ္စ ဖြေရှင်းပေးရန် ဘုန်းကြီးတစ်ပါးထံ ရောက်လာကြပါသည်။ ပထမလူက သူ့ဘက်က သူ့အမြင်ကို ပြောပြပါသည်။ ဘုန်းကြီးက ခေါင်းညိတ်ရင်း “ခင်ဗျား မှန်တယ်” ဟု ပြောပါသည်။
အခြားလူကလည်း သူ့ဘက်က သူ့အမြင်ကို တင်ပြပြန်ပါသည်။ ဘုန်းကြီးက တစ်ဖန် ခေါင်းညိတ်ပြရင်း “ခင်ဗျားမှန်တယ်” ဟုပြောပါသည်။
ပထမလူက မကျေမနပ်ဖြင့် “ဘုန်းကြီး-ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လုံး မှန်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး” ဟုပြောလိုက်ပါသည်။
ဘုန်းကြီး၏ မျက်လုံးများသည် ထိုသူ၏ စကားကို သဘောကျသဖြင့် အရောက်များပင် တောက်ပလာပါသည်။ ထို့နောက် ပြုံးပြုံးကြီးလုပ်ပြီး “ ခင်ဗျားလည်း မှန်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားသိပါတယ်” ဟုပြောလိုက်ပါသည်။
Posted by Villager at 6:29:00 AM2comments
သက္ကရာဇ် ၁၂၉၄ ခုနှစ် တခူးလပြည်ကျော် (၁၅) ရက် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် လှူဒါန်းပူဇော်ထားသော ကြာနီကန်မြောက်ကျောင်းရှိ အုတ်ကျောင်း
နှစ်ပေါင်း ၇၅ နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်သော အုတ်ကျောင်း
သက္ကရာဇ် ၁၃၃၄ ခုနှစ်က ထွင်းလုပ်ထားသော အုန်းမောင်း(တုန်း)
၃၅ နှစ် ကြာနေပြီဖြစ်သော အုန်းမောင်း
ထိုမောင်းကို နေ့တိုင်း မနက်လေးနာရီ တကြိမ်၊ နေ့လည် (၁၂) နာရီ တကြိမ် တနေ့ နှစ်ကြိမ် ခေါက်ပါသည်။ ယခုထိလည်း ဒီအုန်းမောင်းကိုသာ ခေါက်ပါသည်။
Posted by Villager at 10:20:00 PM0comments
ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး မှန်တာကိုသာ ပြောပါ။
သင့်ကိုသင်ဟာ အမှန်ကိုသာ ပြောတတ်သူလားလို့ မေးခဲ့ရင် “ ဟုတ်ပါတယ်” လို့ဖြေဖို့များတယ် မဟုတ်ပါလား။ ဒါပေမယ့် ထပ်ပြီး စဉ်းစားလိုက်ပါဦး။
ဒီနေ့ကိုပဲ စဉ်းစားလိုက်ပါ။ တစ်နေ့လုံး လုံးဝ အမှန်တွေကို ချည်းပြောခဲ့ပါသလား။
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က အဆင်ပြေရဲ့လား လို့မေး လာတဲ့အခါ တကယ်ပဲ ကောင်းမွန်နေတဲ့ အတွက် Fine လို့ပြောခဲ့တာလား။
ဒေါသတော့ထွက်သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် ထုတ်ဖေါ် မပြခဲ့တာမျိုးကို ဖြစ်ဘူးတယ်မဟုတ်လား။
ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး မှန်တာကိုသာ ပြောလိုက်ပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အမှန်အတိုင်းပြောလိုက်လို့ သူ့ကို သိပ် စိတ်ထိခိုက်သွားမယ်ဆိုရင် ( မင်း ဆံပင်ပုံစံကြီးက မုန်းစရာကောင်းလိုက်တာ ) မပြောဘဲ ထိန်းချုပ်လိုက်ပါ။
မိမိ ကိုယ်ကို မှန်တာကို ပြောကြည့်ပါ။ အဲဒီအခါမှာ ပြောသင့်တဲ့ မှန်ကန်တဲ့စကားတွေကို ပြောဖို့သိရှိလာ နိုင်ပါတယ်။
မှန်တဲ့ စကားတွေကို ပြောကြည့်လိုက်ပါ။
ကိုးကား။ ။ ခင်စောတင့် (သင့်ဘဝကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ)
Posted by Villager at 5:37:00 AM 1 comments
Posted by Villager at 12:49:00 AM6comments
သူတို့ ပါးစပ်က တစ်စုံတစ်ခုကို
အထပ်ထပ်ရွတ်ဆိုနေသလိုပဲ . . .
“ ဘယ်လိုစကားလုံးတွေများပါလိမ့်” လို့
အင်း . . . ဘာတဲ့ . . .
“ x x x x x ရရပါလို၏” ဟုတ်လား . . .
ဒီမယ် . . .
လူကိုပြန်ဖြစ်ဦးမှာ . . .
သူငယ်ချင်း မင့်အိပ်မက်(ဆရာဝန်လေး) ရဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်က သူငယ်ချင်းများ စုစည်းထုတ်ထားသော နှလုံးသားဒိုင်ယာရီ ကဗျာစာအုပ်လေးမှ
Posted by Villager at 12:28:00 AM0comments
အမေ သားကို မနက်လေးနာရီလောက် မိုးထဲ လေထဲမှာ ခက်ခက်ခဲခဲ မွေးခဲ့တာ၊
သားငယ်ငယ်တုန်းက ချူချာလို့ ဂရုတစိုက်ပြုစု ယုယခဲ့တာတွေကို သားသိပါတယ်။
အရွယ်ရောက်လာတော့လည်း ဘာအလုပ်မှ မခိုင်းပဲ စာကိုကြိုးစားခိုင်းတာတွေ၊
ညီအကို မောင်နှမ တွေကြားထဲမှာ အားလုံးထက်ပိုပြီး ဦးစားပေးခဲ့တာတွေကို သိပါတယ် အမေ။
သားက ရွာသားဆိုပေမယ့် ရွာက အလုပ်တွေ ဘာမှ မလုပ်တတ်ပါဘူး။ လုပ်လည်း မလုပ်ဘူးဘူးလေ၊ အမေကမှ မခိုင်းခဲ့တာနော်။
သား စာကြည့်နေရင် အလုပ်ဘယ်လောက်များများ သားကို မခိုင်းပဲ အမေပဲ အပင်ပန်းခံပြီးလုပ်ခဲ့တယ်နော်။
သားက အမေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လယ်တွေ၊ ကိုင်းတွေ ကို အကုန်မရောက်ဘူးဘူးအမေ။ အကုန်လုံးတောင် မသိခဲ့ပါဘူးအမေ။
အမေသာ မနက်လေးနာရီ ရွာဦးကျောင်းက တုန်းမောင်းခေါက်ပြီ်ဆို ထမင်း၊ ဟင်းချက် စတာတွေလုပ်ပြီး တောထဲကို သွားခဲ့တယ်နော်။
တခါတလေ အဖေါ်လိုပေမယ့် သားအိပ်ရေးပျက်မှာစိုးလို့၊ တောထဲလိုက်ရင် ပင်ပန်းမှာစိုးလို့ သားကို မခေါ်ပဲ အမေ တယောက်တည်းပဲသွားခဲ့တယ်နော်။
သား မြို့ကို ကျောင်းတက်ဖို့သွားတော့ မခွဲနိုင်ပေမယ့် သားဘဝအတွက်ဆိုပြီး အမေ့ မျက်ရည်တွေကို စတေးခဲ့တယ်နော်။
သားကိုတွေ့ချင်လို့ မြို့ကို လိုက်လာတော့လည်း (၂)မိုင်လောက် ဝေးတဲ့ ခရီးကို ဘာမှ မစီးပဲ ခြေလျင်လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်နော်။
သားအတွက်ပေးရမယ့် ပိုက်ဆံ နည်းသွားမှာ စိုးလို့ဆိုတာကို အဲဒီတုန်းက သားမသိခဲ့ဘူး အမေ။
အခုသိရတဲ့အချိန်မှာ သား မျက်ရည်ကျရပါတယ် အမေ။
အခုဆိုရင် သားက တက္ကသိုလ်တောင်ပြီးတော့မယ်နော် အမေ။
သား ကျောင်းကနေ အိမ်ကို ခဏပြန်တော့ မိသားစု အားလုံးက နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုကြတော့ သားတော်တော် ပျော်ပါတယ် အမေ။
ဒါပေမယ့် အိမ်က အလုပ်တွေက သားနဲ့ တစိမ်းတွေ ဖြစ်နေတယ် အမေ။
အဖေ လယ်ထွန်တဲ့ဆီ လိုက်မယ်လုပ်တော့ အဖေက “ မင်းမလုပ်တတ်ပါဘူး အိမ်မှာ နေခဲ့စမ်းပါ” တဲ့ အမေ။
အကို နဲ့ ပျိုးချတဲ့ဆီ လိုက်မယ် ဆိုတော့လည်း အကိုက “ မလိုက်ပါနဲ့ ညီလေးရာ တောထဲမှာက ပင်ပန်းတယ်ကွ မင်းမလုပ်နိုင်ပါဘူး” တဲ့လေ။
အမကလည်း “ မောင်လေးရာ ရွာရောက်တုန်း အေးအေးဆေးဆေးနေစမ်းပါ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီး၊ ဘဘုန်းနဲ့ စကားသွားပြောနေ”တဲ့လေ။
အိမ်မှာဆို သားအလုပ်က သီချင်းနားထောင်တယ်၊ စာဖတ်တယ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီး စကားစမြည် ပြောဆိုတယ် အမေ။
သားကျောင်းကို ပြန်မယ်ဆိုတော့ မိသားစု အားလုံး နေပူမရှောင်၊ မိုးရွာမရှောင် ပင်ပန်းစွာ လုပ်မှ ရတဲ့ သီးနှံတွေကို ရောင်းချပြီး သားကျောင်း စရိတ်ကို ပေးခဲ့တယ်နော်။
အမေက သားကို ဆုံးမ စကားတွေလည်း ပြောပေးခဲ့တယ်နော် အမေ။
အမေ သားကို စိတ်မပူရအောင် အမေ့ဆုံးမ စကားတွေကို သား အမြဲနားထောင်ပါတယ် အမေ။
အမေ ပြောတဲ့ အတိုင်း ဘယ်သူနဲ့မှ လည်း ခိုက်ရန် မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အရက်သေစာ၊ လောင်းကစား မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး အမေ။ ဘောလုံးပွဲတော့ကြည့်ခဲ့ပါတယ် အမေ။
တခါတလေကျတော့လည်း ဒီခေတ်မှာ လူငယ်ဖြစ်နေတာ တန်ရဲ့လားလို့ တွေးမိပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်က သားနဲ့ရွယ်တူ လူငယ်တွေ လုပ်နေကြတာတွေကို သားက မလုပ်ဘူးတာတွေများလို့လေ အမေ။
သူငယ်ချင်းတွေ သူတို့ကောင်မလေးတွေနဲ့ သွားတာ လာတာတွေ မြင်ပြန်တော့လည်း အားကျမိပြန်ရော အမေ။
ဒါပေမယ့် သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ သားလုပ်နေရတာတွေကို သားကျေနပ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အမေ့ ကျေးဇူးတွေကို တခြားဟာတွေနဲ့ မဆပ်နိုင်ရင်တောင် အမေ့ စကားကို နားထောင်နိုင်လို့လေ။
အခုတော့ သားက အမေကို မေ့ပြီး Online မှာ Blog လုပ်လိုက် Chatting လုပ်လိုက်နဲ့ လုပ်နေပါတယ် အမေ။
Online ကလူတွေက Online တက်လာတဲ့သူတိုင်း လူလိမ်၊ လူညာလို့ပဲ ထင်နေကြလား မသိဘူး အမေ။
သားက ရိုးရိုးသားသား အမှန်တွေကို ပြောတာကို လိမ်ညာတယ်လို့ ယူဆကြတယ်ထင်တယ် အမေ။
တချို့ က ကိုယ်ကိုကို အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတယ်။ အမှန်ကိုပဲပြောတယ်၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အတိုင်းပြောတတ်တယ်လို့ ပြောပေမယ့် လည်း တကယ်တန်းတော့ သူတို့ လည်း မှားရင် မှားတဲ့အကြောင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မပြောကြပါဘူး အမေ။
သားကလည်း သားရဲ့ အမှားကို ထောက်ပြခဲ့ရင် မှားတယ်လို့ လက်ခံမှာ ပါ မှားခဲ့တာကိုလည်း တောင်းပန်မှာပါ အမေ။
Online မှာ မလိမ်မိအောင် ကြိုးစားပါတယ်။ အမှန်ကို မပြောချင်ရင်တောင် ညာတော့ မညာချင်ဘူး အမေ။
အိမ်မှာ အငယ်ဆုံးလည်း ဖြစ်ပြန်၊ အမေကလည်း အားလုံးထက် ပိုပြီး ဦးစားပေးထားတော့ သားက Online မှာလည်း ဦးစားပေးခံချင်တာ အမေ။
တချို့ တွေကို ဆို သားက တကယ်ခင်မိ၊ သံယောဇဉ် ရှိမိတာပါ အမေ။
ဒါပေမယ့်အမေ သူတို့က သားကို Online ပေါ်မှာ အပျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လိမ်တာညာတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မဟုတ်က ဟုတ်က လျှောက်ပြောနေတဲ့သူ တယောက်လို့ပဲမြင်နေကြတယ် အမေ။
သားအပေါ်မှာလည်း အမေလို ဦးစားပေးမှုမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး အမေ။
ဒါကလည်း သားမှားတာပါ အမေ သားက သူတို့ကို အမေ့လို၊ အကို အမတွေလိုမျိုး ခင်မိသွားပြီး ဆိုးချင်မိတာလေ။
တကယ်တော့ သူတို့က သားရဲ့ မိသားစု မှ မဟုတ်တာနော် အမေ။
သူတို့မှာလည်း အပြစ်မရှိပါဘူးနော်။ သားကိုက ခံစားမှုလွန်ကဲသွားလို့ပါ အမေ။
သားက သူများတွေလို ကြုံသလို၊ တွေ့သလို အပေါ်ယံတွေ မပြောတတ်တာ ခက်တယ်နော် အမေ။
သားနားလည်ပါပြီ။ အမေ့ကို မေ့ပြီး သူတို့နဲ့ တနေကုန် Chatting လုပ်ခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေကြောင့် သား စိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရတာပါနော်။
ခုတော့ ဒါတွေ လျှော့လိုက်ပါပြီ အမေ။ သားအမေ့ စကားကိုနားထောင်ပြီး စာလုပ်ပါ့မယ့်၊ ဘုရားစာလည်းရွတ်ပါ့မယ် အမေ။
အမေ့ အပေါ်မှာ မှားခဲ့တာ ရှိခဲ့ရင်လည်း ခွင်လွှတ်ပေးပါလို့ ရှိခိုးဦးချပြီး တောင်းပန်ပါတယ် အမေ။
ခွင့်လွှတ်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။ သားအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုရှိပြီး၊ နားလည်တတ်တာက အမေ လောက် ဘယ်သူမှ မပိုဘူးဆိုတာ သားသိလို့ပါ အမေ။
သူများပြောတာထက် သားပြောတာကို ပိုယုံကြည်ပေးလို့ အမေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမေ။
သားအပေါ်မှာ အမေ ကောင်းခဲ့တာတွေ၊ ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေ၊ ပင်ပန်းခဲ့တာတွေကို တွေးမိရင် သားမျက်ရည်ကျမိပါတယ် အမေ။
အမေ့ကို လွမ်းလှပြီ အမေ။
ကျောင်းမြန်မြန်ပြီးအောင် စာကြိုးစားလုပ်ပြီး အမေရှိတဲ့ရွာကို သားပြန်လာခဲ့တော့မယ် အမေ။
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲက စကားများကို အမေ့ထံသို့ပြောပြချင်းမျှသာ
Posted by Villager at 9:46:00 PM5comments
ခန္တီစ = သည်းခံခြင်း မင်္ဂလာ
ခန္တီစ= ဆဲဆို ငေါက်ငမ်း ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းအောင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက် ပြုမူချက်ကို အမျက် ပြင်းထန် တုံ့မပြန်ဘဲ သည်းခံခြင်း
၁။ လူအများ မချစ်ခင်ခြင်း၊
၃။ စိတ်မကြည်လင် မရွှင်လန်းခြင်း၊
၄။ တွေဝေလျက် သေရခြင်း၊
၅။ ငရဲသို့ ကျရခြင်း။
၁။ လူအများ ချစ်ခင်ခြင်း၊
၂။ သိမ်မွေ့ နူးညံ့ခြင်း၊
၃။ စိတ်ကြည်လင် ရွှင်လန်းခြင်း၊
၄။ မတွေမဝေ သေရခြင်း၊
၅။ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ခြင်း။
(အဂုင်္တ္တိရ်၊ ပဉ္စက၊ ဒုတိယ အက္ခန္တိ သုတ်)
Posted by Villager at 12:00:00 AM 1 comments
မျက်လုံးများဟာ နှလုံးသားရဲ့ ပြူတင်းပေါက်တဲ့
ထုလုံးရှည် ဆလင်ဒါ သူမုန်းမည်မသေချာ
သူမပြောတတ် . . .
ပိုဆိုးတာက ကျုပ်အသည်းနှလုံးရဲ့ မေတ္တာတရားကိုလည်း
သူသိတာ . . . သူသိတာ
ဆယ်လူလာ နဲ့ အဲယားကွန်း၊ ဒီဗွီဒီ နဲ့ ပရာဒို
မော်ဒယ်ဘိုင်း နဲ့ အင်ဗက်စမင့်
အမလေး . . .
ပါဝါ မျက်မှန်နဲ့ သူမ ရဲ့ နှလုံးသား . . .
သူငယ်ချင်း အောင်(ပေါက်)ရဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်က သူငယ်ချင်းများ စုစည်းထုတ်ထားသော နှလုံးသားဒိုင်ယာရီ ကဗျာစာအုပ်လေးမှ
Posted by Villager at 1:06:00 AM 1 comments
အိုမင်းလာတာနဲ့ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေ ပျက်စီးကုန်တယ်ဆိုတာကို အယုံအကြည် ရှိပါသလား။ လေ့လာမှုများအရ ဒီအချက်ဟာ တကယ်တော့ မမှန်ကုန်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အသက်(၆၀) နဲ့ (၇၀) အရွယ်တွေက သူတို့ရဲ့ စိတ်စွမ်းရည်က တစ်နှစ်မှာ ၁% ရာခိုင်နှုန်းထက် လျော့နည်းပြီး ကျဆင်းတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ အသက်(၈၀) အရွယ်တွေကတော့ ၂% ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မကြာသေးခင်က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာချက်အရ super young ( သူတို့ရဲ့ နဂိုအသက်ထက် နှစ်များစွာနုပျို တက်ကြွရွှင်လန်းသူများ) တွေက သူတို့ရဲ့ နုပျိုတဲ့စိတ်ကိုတောက်ပစေတဲ့ အဓိကအရည်အသွေးတွေက-
သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကောင်းအောင်တွေးပြီး ပွင့်လင်းတဲ့ဓာတ်ခံရရှိ။
သူတို့ကိုယ်သူတို့ အပြစ်ရှာ ဝေဖန်ခြင်းမပြု။
အငြိမ်းစားယူရမယ့် အရွယ်ထက်ကျော်လွန်ပြီး အလုပ် လုပ်။
Super young ဖြစ်အောင်နေပါ။
Posted by Villager at 11:02:00 AM 1 comments